ကြော်ငြာကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media
လှကျော်ဇော ● ဗိုလ်ကျော်ဇောရာပြည့်အကြို စာအုပ်ထွက်မည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ (၃) ရက်နေ့မှာ ဖေဖေ (၉၉) နှစ်ပြည့်ပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့်ရာပြည့်အကြိုအဖြစ် နေရီရီစာပေက ကျွန်မဆက်၍ရေးချင်သောဖေဖေအကြောင်းများ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်...
အလယ်ရိုးမကဗျာဆရာများ – ” မြစ်” ကဗျာ/အနုပညာမဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၂) အစီအစဉ်ကြေညာ
” မြစ်” ကဗျာ/အနုပညာမဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၂) အစီအစဉ်ကြေညာ အလယ်ရိုးမကဗျာဆရာများ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် “မြစ်´´ ကဗျာ/အနုပညာမဂ္ဂဇင်းအမှတ် (၁)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ (၂၁)ရက်နေ့ (ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့) တွင် စီစဉ်ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။ ယခု “မြစ်´´...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း နောက်ဆုံးထုတ်ကို WE မှာ ဝယ်ပါ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၄ အမှတ် ၉ စက်တက်ဘာကို WE Distribution...
မိုးမခထုတ် မောင်စွမ်းရည်စာအုပ် WE မှာ ဝယ်ပါ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ မိုးမခ စာပေတိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုး အကြောင်း ဆရာကြီး မောင်စွမ်းရည်ရေးတဲ့ “သူငယ်ချင်းတင်မိုး” စာအုပ်ကို WE...
မိုးသီးဇွန်တကိုယ်တော်ပြပွဲ – ပန်းဆိုးတန်းဂယ်လာရီ – (စက်တင်ဘာ ၂၃ -၂၄ -၂၅ရက်) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ (ဒေါက်တာတင်မင်းထွန်းပေးပို့သည်) ၈- လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံမှာ ကမ္ဘာသိထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ မိုးသီးဇွန်ရဲ့...
မင်းကိုနိုင်ရဲ့ ဒဏ်ရာရ ပန်းသီးများ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇ “ဖဲဆိုတာ ဂမ္ဘီရပညာရှင်တွေက လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကို ဟောကိန်းထုတ်လို့ရတဲ့ တဲရော့ဗေဒင်ကို အဓွန့်ရှည်တည်တံ့အောင်အမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ထားရစ်ခဲ့တာကွ အ​မှောင်​လမ်းကြားထဲ စမ်းတဝါးဝါးဒုက္ခမရောက်ရအောင် ဂရုဏာနဲ့” “တော်စမ်းပါ ချမ်းသာရာ”...
ချစ်ဦးညို၊ ဂျူး နဲ့ ထင်လင်းဦး – အင်ဒီယားနား၊ ဖို့(တ်)ဝိန်းမြို့ ၊ စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
ချစ်ဦးညို၊ ဂျူး နဲ့ ထင်လင်းဦး – အင်ဒီယားနား၊ ဖို့(တ်)ဝိန်းမြို့ ၊ စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၇ စာရေးဆရာ၊ ချစ်ဦးညို ၊ စာရေးဆရာမ၊ ဂျူး၊...
တာရာမင်းဝေ (၁၉၆၇-၂၀၁၇) ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ကဗျာရွတ်ပွဲ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၇ တာရာမင်းဝေ (၁၉၆၇-၂၀၁၇) ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ကဗျာရွတ်ပွဲလေးကို ဩဂုတ်လ...
အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို လျော့နည်းနိုင်မည့် လျှိူ့ဝှက်ချက်များနှင့် ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းများ- ခင်စောတင့် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၇ ဆရာမကြီးခင်စောတင့် အသက်(၈၀ ) ပြည့်နှစ်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဆရာမကြီးရဲ့( ၇၅ ) အုပ်မြောက် အမှတ်တရစာအုပ်ပါ။ အိုမင်းခြင်းဟာ...
သစ်ဦးဇင် မြန်မာပြန်သော မဖြူ ( သို့မဟုတ် ) ရခိုင်မြေမှ ချစ်ပုံပြင် စာအုပ်စေတမန် (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၇ ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် ဂျိမ်းလှကျော်ရေးခဲ့သော” မောင်ရင်မောင် မမယ်မ ”...
15 US$ only for US Readers only (ဒေါ်)ခင်ခင်ဝင်း၏ ရေဆန်လမ်းမှ အိမ်အပြန် စာအုပ် မိုးမခမှာ မေးဝယ်ပါ (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အနီးကပ်မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်တဲ့...
နိုင်ဝင်းသီရဲ့ နာရီတစ်လုံးရဲ့အလျား (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၇ နိုင်ဝင်းသီရဲ့ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုစာအုပ်ပါ။ မိုးမခအွန်လိုင်း (Online) မှာရော ပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်း (Print) တွေမှာပါ သပ်ရပ် လှပတဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတွေ၊ အက်ဆေးလေးတွေ...
၈ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ကြေညာပွဲ အခမ်းအနား ဒင်းဗားမှာ ကျင်းပမည် (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
မေငြိမ်း ကိုယ်ပိုင် မြန်မာစာသင်တန်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၇ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲမှာ အမေရိကန်သံတမန်တွေကို ဘာသာစကားသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းမှာ မြန်မာစာဆရာမ အလုပ်ရခဲ့ရာကနေ VOA မြန်မာပိုင်းမှာ...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာပြည်အနှံ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တနှစ်လုံးကို ကဗျာနဲ့ အနှစ်ချုပ်ထားတဲ့ ယောဟန်အောင်ရဲ့ ‘ပြည်တော်ပြန်’ ကဗျာ မျက်နှာဖုံးနဲ့ မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း...
၂၀၁၆ ခုနှစ် နယူးယောက်မြို့ စာပေဟောပြောပွဲ နိုဝင်ဘာ ၂၇ အတွက် ဖိတ်စာ (မိုးမခ ကြော်ငြာ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆ စာရေးဆရာ ကြည်မင်း စာရေးဆရာမ ရွှေကူမေနှင်း စာရေးဆရာမ မိချမ်းဝေ 27th...
၂၀ နိုဝင်ဘာ၊ ဆန်ဖရန်မှာ ဟောမည့် ကြည်မင်း၊ ရွှေကူမေနှင်းနဲ့ မိချမ်းဝေ တို့ စာပေပွဲ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို စာပေခရီးစဉ်နဲ့ စာရေးဆရာကြီးများဖြစ်တဲ့ ကြည်မင်း (ကျော်စောမင်း)၊ ရွှေကူမေနှင်းနဲ့...
မြန်မာစာရေးစာဆရာ ၃ ဦး အမေရိကန် စာပေဟောပြောပွဲခရီး လာရောက်မည် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ၂၊ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ လလယ်ပိုင်းမှာ မြန်မာစာရေးဆရာများဖြစ်တဲ့ ကြည်မင်း၊ ရွှေကူမေနှင်း နဲ့ မိချမ်းဝေတို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို စာပေဟောပြောပွဲခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာမှာ...
Think Art Cartoon Exhibition နိုဝင်ဘာ ၁၂ မှ ၁၅ ကျင်းပမည်၊ ဖိတ်စာ (မိုးမခ ကြော်ငြာ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ No tags for this post....